Akhriso 4 waxyaabood oo sabab u ah in ciidamada Dawlada faderaalku ay iska dilaan darawalada bajaajta
Saturday April 13, 2019 - 19:37:22 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by . .
Ciidamada Booliska ee ku sugan Isgoyska Hawlwadaag ee Magaalada Muqdisho, ayaa saaka dilay nin dhalinyaro ahaa oo watay Mooto Bajaaj kadib markii rasaas lagu furay.
Askariga ayaa u diiday Mooto Bajaajta inay marto wadada, waxaana uu ku furay rasaas, taasi oo keentay inuu dhinto ninkii waday Mootada, sidoo kalena uu dhinto ruux kale oo la socday.
Ciidamo badan oo Boolis ah ayaa ku sugan Isgoyska Hawlwadaag ee Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo handadaad & dhibaatooyin kale kula kaca dhalinyarada Mootooyinka Bajaajta ku xamaasha.
Tacadiyada Ciidamada ay gaysanayaan ayaa noqday kuwa soo laa laabta ,marka loo eego sida bareerka ah ee ay u dilayaan dhalinyarada.
Dhalinyarada Mootooyinka Bajaajta ku xamaasha ayaa xiray gabi ahaanba isku socodka inta badan Jidadka Wadnaha iyo Makka Al-Mukarama , halkaasi oo ay ku dhigayaan Banaanbax cabasho ah.
Eng. Yariisow iyo Taliyaha Booliska ayaa dhalinyarada dibad baxayay ugu tagay Isgoyska Bakaaraha ee wadada wadnaha, iyagoo ka codsaday inay xaalada dejiyaan.
Guddoomiye Yariisow ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay si nabad ah ku muujiyaan shucuurtooda oo ay nidaamka ilaaliyaan.
Bishii la soo dhaafay dabayaaqadeeda ayeey aheyd markii askari ka tirsanaa Ciidamada Booliska uu dilay nin watay Mooto Bajaaj, taasi oo keentay inay banaanbax dhigaan dhalinyarada Mootooyinka ku shaqeysta.
Sababta loo dilo darawalada Bajaajka ee Muqdisho?
Inkastoo ay siyaabo kala duwan keento dilka Muqdisho loogu geysto Darawalada Bajaajyada, waxaana halkaan kusoo koobeynaa waxyaabaha keeno dilkooda:
Jidadka oo xiran
Inta badan waxaa caado ka ah Muqdisho in la xiro jidadka, waxayna taas sababtaa in dil loo geysto maadaama ay Darawalada Bajaajyada ku adkeystaan marista jidadka iyadoo ku andacoonayo in Biil laga sugayo.
Darawalada Bajaajyada inta badan waa kuwa soo kireysto oo laga rabo inay Maalintii bixiyaan 10 Dollar, taasna waxay sababtaa inaysan ku qancin xirista jidadka maadaama laga sugayo bixinta lacagtaas.
2) Ciidamada oo aysan wax la aheyn dilka shacabka:
Ciidamada Dowladda qeybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa Booliska ayaa ah kuwa aan u tababarneyn la dhaqanka Shacabka iyo ilaalinta dhiiggooda.
Waxaa moodaa in dhiigga shacabka uusan wax micno ah ugu fadhin ciidamada Booliska isla markaasna aan lagu soo tababarin in waxa ay Boolis u yihiin ay tahay ilaalinta nafta iyo Hantida Shacabka.
3) Cabsida Ciidamada
Inta badan ciidamada la dhigo jidadka xiran ee Muqdisho ayaa ah kuwa mar kasta ka cabsanayo weeraro iyo dhibaato kaga timaado Kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay ciidamada inta badan u dilaan dadweynaha maadaama ay inta badan yihiin kuwa cabsanayo qoryahana uu ammaanka u furan yahay.
Ciidamada marka ay doonayaan inay dadka iyo Gawaarida ka celiyaan jidadka xiran waxay si xisaab la’aan ah qoryaha ugu taagaan Dadweynaha xilli uu furan yahay Ammaanka isla markaasna uu farta ku hayo Riishada.
4) Askarta Darwalada Bajaajyada disho oo aan la ciqaabin
ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ee geysta falalka dilka ah ee lagu dilo dhalinyarada bajaajka ayaa baxsado, mana jirto ilaa iyo haatan askari lasoo qabtay oo cadaaladda la horgeeyay.
Taliyaasha iyo Hoggaanada Gobolka Banaadir ayaa mar kasta shacabka u sheego in la qabtay Askarta falalka dilka ah geysto balse Saxaafadda looma soo bandhigo sidoo kalana Tiirka lama geeyo.
Taas ayaa sababta inay Askarta ku dhiiradaan beegsiga Shacabka isla markaasna uu dhigga dadweynaha ula mid noqday sida Galaas biyo ah oo la cabayo oo aysan jirin isla xisaabtan ka dambeeyo.